Waa Maxay Toobbadkeenida? – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on August 18, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Toobadkeenida Siduu Inagu Wacdiyay Yooxaana Babtiisaha
Yooxaana Baabtiisaha kaasoo ku wacdiyey lamadegaanka dadka asagoo u sheegayay inay dembiyadooda kasoo toobadkeenaan (Markoos 1 : 4 ). Ciise waa Wiilka Ilaah, kan samada ka soo degay Yooxaana Babtiisaha ayaa noogu cadeeyey markii uu Ciise arkay oo uu lahaa, “arka Wanka ilaah ee dembiyada dadka qaadi doona.” ( markoos 1 : 9). Ilaah Markuu Ruuxa Quduuska ah kusoo dejiyey Wiilkiisa Ciise Masiix ee uu yiri waxaad tahay wiilkayga aan ku faraxsanahay taas oo noo caddeynaysa in Ciise yahay wiilka Ilaah (Markoos 1:10 , 12) Ilaaha Aabbaha ah ayaa Samadda ka dhawaaqay asagoo u marqaati furaya in Ciise yahay wiilkiisa ( Markoos 1:11 ).
Shaydaanka oo u yimid inuu Jar’ribo Ciise Masiixi sidii uu u ja’rribay Adan iyo Xaawa in kastoo oo uu ku guul daraystay jar’ribaadiisa oo uu sayid Ciise Masiix Jar’ribay. ( Markoos1:13 . Wuxuu Mataayoos noo sheegayaa in markii Ciise uu u adkaystay jar’ribaadii shaydaanka oo uu ka guulaystay in Malaa’iggo u imaadeen si ay ugu adeegaan (Mataayoos 4:11)Yooxaanaa Baabtiistaha oo u labisan jiray sida nebi Ilaah, Waxa uu u noolaa oo u hadlayay sida Rasuul xagga Eebe ka yimid (Markoos1 : 6) . Waxaa rumoobay wixii nabiyaalkii Illaah oo ahaayeen Malakii iyo Ishacyaah looga dhex hadlay 700 sano ka hor ee ku saabsanaa Ciise Masiixi, waxay ka hadleen Nebbi ku qaylinaya ( Malaakii 3: 1 ) .
(Ishacyaah 40 : 3 ) “ Hagaajiya jidka Rabbiga, Ka dhiga jidka diyaar oo u diyaariya Rabbiga! “ . Markoos wuxuu isticmaalay hadaladii nebiyada si uu inoogu sheego Yooxaana inuu yahay midka ay Nebiyadaasu ka hadlayeen waana la arkay oo way dhacday ( Markoos 1: 2,3 ) .
Ilaah baa ka buuxiyey yooxaanaa Ruuxiisa xitaa ka hor inta uu san dhalan,si uu u sameeyo shaqadaan (Luukoos 1: 13,41) . Yooxaanaa waa yimid isagoo u sheegaya dadka “joojiya samaynta waxyaalaha khaladka ah hana laydin baabtiiso.” (Markoos 1: 4). Markay dadku ay u sheegaan inay ka xunyihiin qaladaadkooda iyo dambigooda, Yooxanaa markaasuu dadka baabtiisayay. Oo biyaha ayuu hoos u maquursiiyey kadibna wuu soo bixinaayay. Tani waxay muujnaysay in dunidu toobadkeen u baahantahay. ‘Toobad keenka’ waxaa loola jeedaa in aan ka xumaano dembiyadayada iyo in aan rabno in aan iyaga ka soo noqono oo Eebe adeecno.
Dembiyadeenii iyo fakiradeenii sharka lahaa wax yaabahaan afkeena ka dhahnay ama sameeynayba,ama aan hilmaanay inaan sameeyno waxyaabo wanaagsan oo xasanaad leh. Dembigu Ilaah buu naga soocayaa, waayo asagu waa mid wanaagsan iyo mid quduus ah oo aan dembi lahayn. Biyaha aan hoos u galayno waxay ka macna tahay in illaah naga maydhayo ama naga dilayo jirkeena dembilaha ah oo uu mid cusub nasiinayo,markaas waxaan noqonaynaa biloow nadiif ah oo isaga oo kale ah.
Ilaah wuxuu ballanqaaday inuu dadka Israa’iil ka samatabbixinayo cadaawayaashoodii iyo in ay mar kale caabudaan. Ilaah waxa kale oo uu u ballanqaaday inuu soo diri doono Badbaadiyeheenna ama Masiixa. nebiyo badan oo qorniinka quduuska ku qoran ayaa ka hadlay tan laakiin Ayaan darro waxaa dadka soo martay 400 sano oo wax nebiya ah oo la hadla ay waayeen isla markaasna waxaa jiray dad badan oo quustay oo wax rajo ah oo dhan aan lahayn. Markaasay u yimaadeen Yooxanaa! Wuxuu u yimid inuu jidka toosiyo waayo Ciise Masiix ayuu jidka u diyaarinayay Yooxaana ma ahayn Masiixa. Yooxaana dadka wuxuu u sheegay arrin ku saabsan Ciise Masiix – waxa uuna sheegay in qof aad u muhiim ah uu soo socdo ( Markoos1: 7,8).
Haddaba walaalayaal waxaa nalooga baahanyahay inaan toobadkeeno oo aan Ciise Masiixi rumaysano si Ilaah dembiyadeena nooga cafiyo.
Rabbigu Ha idin barakeeyo.
Posted in All resources, Lectures, Qiso gaaban, Qoraal, Waxbaritaanka